Mandany vola amin'ny $ 1.44 Miliara amerikana ny mpitsidika any Hawaii fa ambany noho ny areti-mandringana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao farany momba ny Hawaii » Mandany vola amin'ny $ 1.44 Miliara amerikana ny mpitsidika any Hawaii fa ambany noho ny areti-mandringana
Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany momba ny Hawaii • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Fizahan-tany any Hawaii: nitombo ho $ 1.46 miliara ny fandaniam-bolan'ny mpitsidika tamin'ny febroary 2020
Tonga hatrany Hawaii manakaiky ny ambaratongam-pirazanana ny mpizahatany - manodidina ny 26,000 ny mpandeha tonga isan'andro. Fa ny statistika kosa dia mampiseho fa mitandrina kokoa amin'ny volany izy ireo.
Ny vola lanin'ny mpitsidika rehetra any Hawaii ho an'ireo mpizahatany tonga tamin'ny Jona 2021 dia 1.44 miliara dolara amerikana. Mbola eo ambanin'ny volana Jona 2019 izany raha 163 miliara dolara amerikana ny fandaniana ny mpitsidika - fihenan'ny 11.9 isan-jato.
Tsy nisy isa azo nandaniana ny mpitsidika tamin'ny Jona 2020.
Ireo antontan'isa voalohany ireo dia navoakan'ny Departemantan'ny asa, Fampandrosoana ara-toekarena sy fizahan-tany (DBEDT) sy ny Hawaii Tourism Authority.
Nandritra ny 6 volana voalohany tamin'ny 2021, 4.86 ​​miliara dolara amerikana ny vola lanin'ny mpitsidika. Raha ampitahaina dia nanondro fihenan'ny 45.1 isan-jato avy tamin'ny US $ 8.86 miliara nolaniana tamin'ny tapany voalohan'ny taona 2019.
Nahatratra 791,053 2021 ny mpitsidika tonga tamin'ny serivisy ho an'ny nosy Hawaii tamin'ny volana Jona XNUMX, indrindra ny avy any Andrefana Andrefana sy Etazonia Atsinanana. Alohan'ny manerantany Areti-mifindra COVID-19 sy Hawaiiny fitakiana quarantine ho an'ny mpandeha, ny Nosy Hawaii dia niaina fandaniam-bola sy fahatongavan'ireo mpitsidika marobe tamin'ny taona 2019 sy tao anatin'ny roa volana voalohany tamin'ny taona 2020. Raha ampitahaina amin'ny taona 2019, ny fahatongavan'ireo mpitsidika tamin'ny Jona 2021 dia nilatsaka 16.5 isan-jato tamin'ny fanisana ny volana jona 2019 dia 947,112 mpitsidika (rivotra sy sambo). Raha ampitahaina dia mpitsidika 17,068 ihany no tonga tamin'ny rivotra tamin'ny Jona 2020.
Mpitsidika 2,751,849 2021 no tonga tamin'ny tapany voalohany tamin'ny 27.6, tafakatra 2020 isan-jato raha oharina amin'ny antsasaky ny taona 46.8. Ny totalin'ny tonga dia 5,171,182 isan-jato ambany noho ny mpitsidika 2019 tamin'ny tapany voalohan'ny taona XNUMX.
Nandritra ny volana Jona 2021, ny ankamaroan'ny mpandeha tonga avy any ivelan'ny fanjakana sy ny dia lavitra dia afaka nanadino ny fividianana tena maharitra 10 andro an'ny fanjakana miaraka amin'ny valin'ny COVID-19 NAAT tsy mandeha amin'ny laoniny avy amin'ny mpiara-miasa fitiliana azo antoka talohan'ny niaingany tany Hawaii. amin'ny alàlan'ny programa Safe Travels. Ho fanampin'izany, ny olona nanao vaksiny feno tao Hawaii dia afaka nanilika ny filaharan'ny quarantine nanomboka ny 15 Jona 2021. Nesorina ihany koa ny fameperana ny fivezivezena eo anelanelan'ny 15 Jona 2021. Ny Centers for US Control for Disease and Prevention (CDC) dia nampihatra fameperana ny sambo fitsangantsanganana amin'ny alàlan'ny "Order Sail Order."